Sidee Soonka U saameynayaa Difaaca Jirkaaga? | Xaqiiqonews
Sidee Soonka U saameynayaa Difaaca Jirkaaga?
Ramadaankan ayaa ku soo aaday wati dunida ay la kacaa kufeyso fayruska dheylada ah ee “covid-19”, khubarada caafimaadka ayaana soonka ku tiranaya in uu ka mid noqonaya waxyaabaha kor u qaadi kara difaaca jirka, taasi oo ku xiranaan doonto nooca cunto iyo cabitaan ee qofka uu qaato af-furka iyo saxuurta.
Hadii qofka sooman uu fuliyo talooyinka caafimaad, uuna qaato cuntooyin isku dheeli tiran, saacadaha qofka uu soomanyahay waxa ay u noqon doonaan saameyn wanaagsan, taasi macnaheedu waxa ay tahay waxaa hoos u dhici doono miisaanka saa’idka ah ee qofka.
Sidoo kale qofka soomaan jirkiisa waxa uu la dagaalami doonaa caabquyada jirka ku jira, waxaana taasi barbar socda hoos u dhac ku imaan doona sokorta jirka gaar ahaan maadada insulin,
Khubarada caafimaadka ayaa ku doodaya in muhiim ay tahay in cuntada qofka sooman uu qaadanaayo ay ku jirta khudaarta iyo noocyada kala duwan ee miraha, waxa ayna khubarada cod dheer ku sheegeen in lagama maarmaan ay tahay qofka in uu qaato biyo badan, ugu yaaraan 2 liitar maalintii.
Khubarada caafimaadka ayaa aaminsan in sigaar cabista xiliga af-furka iyo badsashada cabitaanada gaaska leh ay meesha ka saari karaana saameynta wanaagsan ee soonku ku yeelan lahaa caafimaadka qofka.